Six Sigma နှင့် Logistics ဘာလဲ ? ဘယ်လိုလဲ ? အပိုင်း (၂) | Super Light Logistics
Six Sigma နှင့် Logistics ဘာလဲ ? ဘယ်လိုလဲ ? အပိုင်း (၂)
ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွင် DMAIC အသုံးဝင်မှု (Application of DMAIC in Logistics)
ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု သေချာစေရန် Six Sigma ကို အသုံးပြုရာတွင် DMAIC အဓိက ကျောရိုးလုပ် နည်းစနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ DMAIC မှာ အမည်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Define (သတ်မှတ်ပြဌာန်းခြင်း) ၊ Analyze (စီစစ်ပိုင်းခြားခြင်း) ၊ Improve (တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း) နှင့် Control ( စီမံကွပ်ကဲခြင်း) ဟူသော အဆင့်ငါးဆင့်ပါဝင်သည်။ DMAIC သည် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု (Logistics) တွင် Six Sigma ၏ အောင်မြင်မှုဆီသို့ ရှေးရှုသော လမ်းပြမြေပုံတစ်ရပ် (သို့) နည်းလမ်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
DMAIC ၏ အဆင့်တစ်ခုချင်းစီကို အကျဉ်းအားဖြင့် တင်ပြပေးရမည်ဆိုလျှင် ….
သတ်မှတ်ပြဌာန်းမှုအဆင့် (The Define Phase)
သတ်မှတ်ပြဌာန်းမှုအဆင့်တွင် အောက်ပါ အချက်များပါဝင်သည်။
၁။ တိကျသော ပြသနာ ၊ အခက်အခဲ ဖော်ပြချက် တစ်ခုမှ တစ်ဆင့်ပြသနာ /အခက်အခဲကို သတ်မှတ်ခြင်း
၂။ ရည်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ထားမှုတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်ခြင်း
၃။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လုံး၏ စီစဉ်ချမှတ်ထားသည့် အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း
၄။ စားသုံးသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ တိကျသော လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း
– ပြသနာ ၊ အခက်အခဲ ဖော်ပြချက်တွင် အမှားပြုလုပ်မှု ရာခိုင်နှုန်း (သို့) ပြီးခဲ့သည့် လအတွင်း နောက်ကျခဲ့သည့် အမှာစာအရေအတွက် နှင့် ၎င်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့နှင့်ဌာနစသည်တို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု စသည့် ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်ပါသည်။
– ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ထားမှုသည် ပြသနာ ၊ အခက်အခဲ ဖော်ပြချက်၏ ရလာဒ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် လအတွင်း အမှာစာ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြည့်ဆည်းရန် နောက်ကျမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ရည်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်မှုသည်သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှာစာ နောက်ကျမှု ၅ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချရန် သတ်မှတ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
– စားသုံးသူများသည်မည်သည့် စီမံချက် (သို့) မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆို အထူးအာရုံပြုရမည့်သူမာျး ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ ပိုမို နားလည်သဘောပေါက်မှု ရရှိစေရန် စားသုံးသူများ၏ အမြင် ၊ သဘောထားကို မလွဲမသွေ ရယူရန် လိုအပ်သည်။
တိုင်းတာအကဲဖြတ်မှုအဆင့် (The measured Phase)
ပြသနာ (သို့) အခက်အခဲ တစ်ရပ်အပေါ် တိကျသည့် သတ်မှတ်ပြဌာန်းမှုသည် တိုင်းတာအကဲဖြတ်မှုအဆင့်တွင် လုပ်ငန်းများ ပိုမို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် (သို့) လုပ်ငန်းနည်းစနစ်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ် မည်ကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တိုင်းတာ အကဲဖြတ်ပြီး စီစစ်တွက်ချက်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ် ၊ အချိန်နှင့် အရည်အသွေးတို့သည် တိုင်းတာ အကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ရသည့် ယေဘူယျ နယ်ပယ်များပင်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် သင့်လျော်သည့် ဂရုပြုမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မှားယွင်းသည့် အရာများကို တိုင်းတာ အကဲဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် (သို့) မှန်ကန်သည့် အရာများကို မှားယွင်းသည့် နည်းလမ်းဖြင့် တိုင်းတာအကဲဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များသည် စိတ်ချယုံကြည်ရမှုနှင့် တိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရေးအတွက် သတိပြု ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
စီစစ်ပိုင်းခြားမှုအဆင့် (The analyze phase)
ဤအဆင့်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ပြသနာ ၊ အခက်အခဲ၏ အကြောင်းအရင်းအမြစ်နှင့် ကြောင်းကျိုး ဆက်နွယ်မှုတို့ကို ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည် ကုန်စည် စီးဆင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်အတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအဆင့်သည် မလိုလားအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များ ၊ အမြတ်အစွန်း လျှော့ကျစေမှုနှင့် စားသုံးသူ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ကျဆင်းစေမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရှေးရှုနေသည့် ကိစ္စရပ်များအား ရွေးချယ် ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤအဆင့်တွင် ပြီးခဲ့သည့် အဆင့်မှ စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် နောက်ထပ် အချက်အလက်များ(ထပ်မံရရှိပါက) ကို ပြန်လည် စီစစ် သုံးသပ်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အချက်အလက်နှစ်ခုလုံးကို စီစစ်ပိုင်းခြားကာ ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်နှင့် လေလွင့် ပြုန်းတီးမှုများ၏ အရင်းအမြစ်ကို စီစစ်အတည်ပြုသည်။ ထို့နောက် စာရင်းဇယားဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုကာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စီစစ်ပိုင်းခြားမှုအဆင့်တွင် အောက်ပါ စီစစ်မှုများပါဝင်သည်။
၁။ အချိန်စီစစ်ပိုင်းခြားမှု (Time Analysis)
အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်နှင့် စောင့်ဆိုင်းနေရချိန် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။
၂။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပြသနာများကို ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်မှု (Value added analysis)
စားသုံးသူများ၏ ရှုထောင့်မှ လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ် သေချာအောင် စီစစ်လေ့လာခြင်း။
၃။ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ်ရေးဆွဲစီစစ်မှု
ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကားချပ်ကို အသုံးပြုကာ ချွတ်ယွင်းချက်များ ၊ အချိန်ဆုံးရှုံးမှုများ ၊ လေလွင့်ပြုန်းတီးမှုများ ဖြစ်စေသည့်အခါက အကြောင်းအရင်းများကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအဆင့် (The improve phrase)
ဤအဆင့်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ပြီးခဲ့သည့် အဆင့်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ပြသနာများ၏ အရင်းအမြစ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်မည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ကွဲလွဲမှု ၊ ကွာဟမှုများကို လျော့နည်းစေပြီး ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း ၊ ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိစေရန် တားဆီးပေးနိုင်သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လုံးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် PDCA ခေါ် Plan (စီစဉ်ပါ) Do (ဆောင်ရွက်ပါ) Check ( စစ်ဆေးပါ) Act (ကျင့်သုံးပါ) ဆိုသည့် စစ်ဆေးမှုစက်ဝိုင်းကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်း အကြံဉာဏ်များကို ပုံဖော်မွမ်းမံသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံကွပ်ကဲခြင်းအဆင့် (The Control Phrase)
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ဤအဆင့်တွင် အားဖြည့်ထောက်ကူ ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်သည်။ ဤအဆင့်တွင် အဓိက ကွာဟမှုများကို သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာအတွင်းသာရှိစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အတိအကျ သတ်မှတ်ထားသည်။
ဤအဆင့်တွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် အလုပ်သမားများအား အပြောင်းအလဲ အသစ် ၊စံနှုန်းအသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးသည်။ ဤအဆင့်တွင် စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အင်အားစုများကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားသည့်အခါ မှန်ကန်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ရေးကိုလည်း အာရုံစိုက် ဂရုပြုသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း six sigma နည်းပညာသည် ကုန်စည် စီးဆင်းမှု လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကောင်းစွာ အသုံးဝင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များ ဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားရေးနှင့် ကွဲလွဲကွာဟမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် ထိထိရောက်ရောက် အထောက်အကူပြုသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။